I-Thiazolidinediones: imiyalo yokusebenzisa nendlela yokusebenza > Ukwelashwa nokuvimbela
Amalungiselelo we-Thiazolidinedione - izici nezinhlelo zokusebenza
Umuthi wanamuhla usebenzisa iqembu lezidakamizwa ezahlukahlukene ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 2.
Elinye lalamaqembu yi-thiazolidinediones, enomphumela ofanayo ne-metformin.
Kukholelwa ukuthi, uma uqhathanisa nale nto engenhla esebenzayo, ama-thiazolidinediones aphephile.
Iphathwa kanjani i-pathology?
Ukwelashwa kwesifo sikashukela kuyindlela eyinkimbinkimbi yezinyathelo.
Izindlela zokwelapha zibandakanya inkambo yezokwelapha, ukulandela ukudla okuqinile, ukwelashwa ngokomzimba, ukwelashwa okungezona izidakamizwa kanye nokusetshenziswa kwezindlela zokupheka zemithi yendabuko.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela kubandakanya ukusetshenziswa kwemithi ekhethekile ukufeza izinhloso ezithile zokwelapha.
Lezi zinhloso zokwelashwa yilezi:
ukugcina inani le-insulin ye-hormone ezingeni elidingakalayo,
Ukujwayelekile kwenani le-glucose egazini,
isithiyo ekuqhubekeni phambili kwenqubo ye-pathological,
ukungathathi hlangothi kokuboniswa kwezinkinga nemiphumela emibi.
Inkambo yokwelapha ifaka ukusetshenziswa kwamaqembu alandelayo wezidakamizwa:
Ukulungiswa kweSulfonylurea, okwenza cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye ayo yonke imishanguzo ehlisa ushukela. Amathebhulethi anjalo enza ukungalingani kwe-insulin kubonakale.
AmaBiguanides izidakamizwa ezinento esebenzayo efana ne-metformin. Ingxenye inomphumela omuhle ekunciphiseni isisindo, futhi futhi isiza ukunciphisa ushukela wegazi. Njengomthetho, awusetshenziswa uma kwenzeka ukungasebenzi kahle kwezinso nesibindi, ngoba kuqoqana ngokushesha kulezi zitho.
Ama-inhibitors we-Alpha-glycosidase asetshenziswa prophylactically ukuvimbela ukukhula kwesifo sikashukela sohlobo 2. Inzuzo enkulu yezidakamizwa zaleli qembu ukuthi ayiholeli ekubonakalisweni kwe-hypoglycemia. Izidakamizwa ezibekiwe zinomphumela onenzuzo ku-normalization yesisindo, ikakhulukazi uma kulandelwa ukwelashwa kokudla.
Ama-Thiazolidinediones angasetshenziswa njengesidakamizwa esikhulu ekwelapheni i-pathology noma ngokuhlangana nezinye izidakamizwa ezinciphisa ushukela. Umphumela oyinhloko wamathebulethi ukwandisa ukuzwela kwezicubu kwe-insulin, ngaleyo ndlela nokunciphisa ukumelana. Le mishanguzo ayisetshenziswa ekwakheni uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1, ngoba ingenza kuphela lapho kukhona i-insulin, ekhiqizwa ngamanyikwe.
Ngaphezu kwalokho, kusetshenziswa ama-meglitinides - imithi ekhulisa ukuvikelwa kwe-insulin, ngaleyo ndlela ithinte amaseli we-pancreatic beta.
Ukwehla kwamazinga kashukela kubhekwa ngemuva kwemizuzu eyishumi nanhlanu ngemuva kokuthatha iphilisi.
I-Thiazolidinediones iveza imiphumela ngokuncipha kokumelana ne-insulin. Kukhona ama-2 thiazolidinediones atholakalayo emakethe - rosiglitazone (Avandia) kanye ne-pioglitazone (Actos). UTroglitazone wayengowokuqala esigabeni saso, kepha wakhanselwa ngoba wabangela ukungasebenzi kahle kwesibindi. Izidakamizwa zingasetshenziswa zombili njenge-monotherapy, futhi zihlanganiswe nezinye izidakamizwa.
Indlela yokusebenza. I-Thiazolidinediones ikhulisa ukuzwela kwe-insulin ngokwenza izicubu ze-adipose, izicubu nesibindi, lapho zikhulisa khona ukusetshenziswa kwe-glucose futhi kunciphise ukwakheka kwayo (1,2). Indlela yokusebenza ayizwisiseki ngokuphelele. Zisebenza uhlobo olulodwa noma ngaphezulu lwama-receptors asebenza ngokwanda kwe-peroxisome proliferation (RAPP) ama-Receptors asebenzisa ukubhebhetheka kwe-peroxisome, wona, alawula ukubonakaliswa kofuzo (3).
Ukusebenza kahle I-pioglitazone ne-rosiglitazone inokusebenza okufanayo noma ukusebenza okuncane kancane njengamanye ama-hypoglycemic agents. Inani eliphakathi le-hemoglobin ye-glycosylated uma uthatha i-rosiglitazone lehla ngo-1,2-1,5%, kanti ukunyuswa kwama-lipoprotein aphezulu futhi aphansi kuyanda. Ngokusekelwe kudatha, kungabhekwa ukuthi ukwelashwa nge-thiazolidinediones akupheleli ngokuya ngokusebenza kokulashwa kwe-metformin, kodwa ngenxa yezindleko eziphakeme kanye nemiphumela emibi, le mithi ayisetshenziselwa ukwelashwa kokuqala kwesifo sikashukela.
Umphumela we-thiazolidinediones ohlelweni lwethambo nenhliziyo. Izidakamizwa ezikuleli qembu zingaba nomsebenzi wokulwa nokuvuvukala, i-antithrombotic, kanye ne-anti-atherogenic, kepha ngaphandle kwalokhu, imininingwane ekhombisa ubungozi obuncishisiwe besifo senhliziyo ayimangazeki, futhi isibalo semiphumela emibi siyesabisa (4,5,6,7). Imiphumela yokuhlaziywa kwe-meta ikhombisa isidingo sokuqapha ekusetshenzisweni kwe-thiazolidinediones ne-rosiglitazone ikakhulukazi, ngenkathi idatha entsha ingakuqinisekisi noma kwenqabe idatha ye-cardiotoxicity. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuthi ucabangele ukuthi kungenzeka ukuthi ube nokuhluleka kwenhliziyo. Kulesi simo, akunconywa ukusebenzisa i-rosiglitazone uma kungenzeka ukusebenzisa izidakamizwa eziphephe kakhulu (i-metformin, i-sulfonylureas, i-insulin).
Lipids. Ngesikhathi sokulashwa nge-pioglitazone, ukuqoqwa kwe-lipid-density lipids kuhlala kungashintshiwe, futhi nangokwelashwa nge-rosiglitazone, ukwanda kokuhlushwa kwale ngxenye ye-lipid kubonwa ngumaphakathi we-8-16%. (3)
Ukuhlelwa kokuphepha |Izici ze-thiazolidinediones
I-Thiazolidinediones, ngamanye amagama glitazones, yiqembu lezidakamizwa eziphonsa ushukela ezihlose ukwandisa umphumela wegciwane le-insulin. Ukwelashwa kwesifo sikashukela i-mellitus kwaqala ukusetshenziswa kakhulu muva nje - kusukela ngo-1996. Kukhiqizwa ngokuqinile ngomuthi.
I-Glitazones, ngaphezu kwesenzo se-hypoglycemic, inomphumela omuhle ohlelweni lwezinhliziyo. Umsebenzi olandelayo wabonwa: antithrombotic, antiatherogenic, anti-inflammatory. Lapho uthatha i-thiazolidinediones, izinga le-hemoglobin ye-glycated lehla ngokwesilinganiso ngu-1.5%, futhi izinga le-HDL landa.
Ukwelapha ngezidakamizwa zalesi sigaba akusebenzi kangako ukwelashwa ngeMetformin. Kepha azisetshenziswa esiteji sokuqala ngesifo sikashukela sohlobo 2. Lokhu kungenxa yobunzima bemiphumela emibi nentengo ephakeme. Namuhla, ama-glitazones asetshenziselwa ukwehlisa i-glycemia ene-sulfonylurea derivatives ne-metformin. Zingabekwa zombili ngokwahlukana nomuthi ngamunye, futhi zihlanganisiwe.
Phakathi kwezimpawu zemithi kukhona okuhle nokubi:
khuphula isisindo somzimba ngo-2 kg ngokwesilinganiso,
Uhlu olukhulu lwemiphumela emibi
Thuthukisa iphrofayili ye-lipid
Ngokuphumelelayo thinta ukumelana ne-insulin
umsebenzi wehlisela ushukela omncane ngokuqhathaniswa ne-metformin, i-sulfonylurea derivatives,
nciphisa izinto ezithinta ukuthuthukiswa kwe-atherosulinosis,
gcina uketshezi, futhi ngenxa yalokho, izingozi zokuhluleka kwenhliziyo zanda,
banciphise ukuqina kwamathambo, okwandisa ingozi yokuqhekeka,
I-Thiazolidinediones isebenza kuma-receptors, athuthukisa ukusatshalaliswa kanye nokuthathwa koshukela ngamangqamuzana. Isenzo se-hormone esibindini, izicubu ze-adipose nezicubu zomzimba ziyathuthuka. Ngaphezu kwalokho, umthelela osezingeni lezinkomba ezimbili zokugcina uphakeme kakhulu.
Ama-Glitazones awavusi ukukhiqizwa kwe-insulin ngamaseli we-pancreatic β-cell. Ukuncishiswa kokusebenza kutholakala ngokunciphisa ukumelana kwe-insulin kwezicubu ezibuthakathaka kanye nokwandisa ukusetshenziswa kwe-glucose ngezicubu. Umphumela wehlisela ushukela, njengomthetho, kwenzeka kancane kancane. Izinga eliphakeme lokudla okushukela lubonwa kuphela ngemuva kokudla izinyanga ezimbili. Ukwelashwa kuhambisana nokuthola isisindo.
Kukhona ukuthuthuka kokulawulwa kwe-metabolic ngokunciphisa ushukela wegazi. Lapho kuhlangene ne-metformin ne-sulfonylurea derivatives, ukulawulwa kwe-glycemic kuyathuthuka ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, kanye namazinga ama-hormone weplasma abalulekile emtholampilo. Ama-Glitazones enza kuphela phambi kwe-insulin.
Amapharamitha we-Pharmacokinetic angahluka ngokuya ngesidakamizwa. Ungabathinti ubulili nobudala besiguli. Ngokulimala kwesibindi ezigulini, kushintsha ama-pharmacokinetics.
Ama-Thiazolidinediones anqunyelwe ushukela ongaxekile kwe-insulin (uhlobo 2 sikashukela):
njenge-monotherapy kulezi ziguli ezilawula izinga le-glycemia ngaphandle kwemithi (ukudla nokuzivocavoca),
njengokwelashwa okumbaxambili ngokuhlangana namalungiselelo we-sulfonylurea,
njengokwelashwa okubili nge-metformin yokulawula okwanele kwe-glycemic,
njengokwelashwa okuphindwe kathathu kwe- "glitazone + metformin + sulfonylurea",
inhlanganisela ne-insulin ne-metformin.
Phakathi kokuphambana ngokuthathwa kwemithi:
ukukhulelwa / ukuqunjelwa,
ukwehluleka kwesibindi - ukuqina okukhulu nokulinganiselayo,
ukwehluleka kwezinso kukhulu.
Inkulumo yevidiyo ngamalungiselelo eqembu le-thiazolidinedione:
Phakathi kwemiphumela emibi ngemuva kokuthatha i-thiazolidinediones yile:
kwabesifazane - ukungahambisani nokuya esikhathini,
ukwephulwa kwesimo sehomoni,
amazinga andayo wama-enzyme wesibindi,
Ubuhlungu besisu, ukukhathazeka,
ukuqubuka kwesikhumba, ikakhulukazi i-urticaria,
ukwakheka okuhle - ama-polyps kanye nama-cysts,
izifo zokuphefumula eziphezulu.
Ekuhambeni kwezokwelapha, isisindo nezimpawu zigadiwe ezibonisa ukugcinwa kwamanzi. Ukuqapha umsebenzi wesibindi kuyenziwa futhi. Ukusetshenziswa komthamo olinganiselayo wotshwala akukuphazamisi kakhulu ukulawulwa kwe-glycemic.
Umthamo, indlela yokuphatha
I-Glitazones ithathwa ngaphandle kokudla. Ukushintshwa komthamo wabantu asebekhulile abaphambuka okuncane esibindini / ezinso akusenziwa. Isigaba sokugcina seziguli sinqunywa umthamo ophansi nsuku zonke wezidakamizwa. Umthamo unqunywa udokotela uqobo.
Ukuqala kokwelashwa kuqala ngethamo eliphansi. Uma kunesidingo, iyandiswa ekugxileni ngokuya ngomuthi. Lapho ihlanganiswa ne-insulin, umthamo wayo uhlala ungashintshiwe noma uyancipha nemibiko yezimo ze-hypoglycemic.
Uhlu Lezidakamizwa lwe-Thiazolidinedione
Abameli ababili be-glitazone bayatholakala emakethe yezokwelapha namuhla - i-rosiglitazone ne-pioglitazone. Owokuqala eqenjini yi-troglitazone - washeshe wakhanselwa ngenxa yokuthuthuka kokulimala kwesibindi esinzima.
Izidakamizwa ezisuselwa ku-rosiglitazone zifaka lokhu okulandelayo:
I-4 mg avandia - eSpain,
I-4 mg Diagnitazone - i-Ukraine,
Qhosha ku-2 mg no-4 mg - eHungary.
Izidakamizwa ezenziwa ngePiogitazone zifaka:
I-Glutazone 15 mg, 30 mg, 45 mg - i-Ukraine,
I-Nilgar 15 mg, 30 mg - eNdiya,
I-Dropia-Sanovel 15 mg, 30 mg - iTurkey,
I-pioglar 15 mg, 30 mg - eNdiya,
I-Pyosis 15 mg no-30 mg - eNdiya.
Rosiglitazone. Ukusetshenziswa kotshwala akuthinti ukulawulwa kwe-glycemic. Akukho ukusebenzisana okubalulekile ngezindlela zokuvimbela inzalo yethebhulethi, iNifedipine, iDigoxin, iWarfarin.
I-Pioglitazone. Lapho kuhlanganiswa ne-rifampicin, umphumela we-pioglitazone uyancishiswa. Mhlawumbe ukwehla okuncane ekusebenzeni kahle kokuvimbela inzalo ngenkathi uthatha izindlela zokuvimbela inzalo ezibhebheni. Lapho usebenzisa i-ketoconazole, ukulawula kwe-glycemic kuvame kakhulu.
Ama-Thiazolidinediones akagcini nje ngokunciphisa amazinga kashukela, kepha futhi anomthelela omuhle ohlelweni lwezinhliziyo. Ngaphezu kwezinzuzo, zinezici eziningi ezingezinhle, okuvame kakhulu kuzo ukuthuthukiswa kokuhluleka kwenhliziyo kanye nokwehla kwezinga lamathambo.
Zisetshenziswa ngenkuthalo ekwelashweni okuyinkimbinkimbi, ukusetshenziswa kwama-thiazolidinediones ukuvimbela ukukhula kwesifo kudinga ukufundelwa okuthe xaxa.
Izidakamizwa zokukhetha zokuqala zesifo sikashukela sohlobo 2 ezigulini ezikhuluphele yi-metformin noma izidakamizwa ezivela eqenjini le-thiazolidinediones.
Ezigulini ezinesisindo somzimba esijwayelekile, ezikhethiwe zinikezwa kumalungiselelo we-sulfonylurea noma ama-meglitinides.
Ngokungasebenzi kahle kwethebhulethi elilodwa, njengomthetho, inhlanganisela yezidakamizwa ezimbili (ezingaphansi kaningi ezintathu) inqunyelwe. Inhlanganisela esetshenziswa kakhulu:
sulfonylurea + metformin,
metformin + thiazolidinedione,
metformin + thiazolidinedione + sulfonylurea.
Okudume kakhulu izidakamizwa ezihlobene nokutholwa kwe-sulfonylurea (kuze kube yi-90% yazo zonke izidakamizwa ezinciphisa ushukela). Kukholelwa ukuthi ukwanda kokuqunjelwa kwe-insulin yizidakamizwa zalesi sigaba kuyadingeka ukunqoba ukumelana ne-insulin.
Amalungiselelo wesizukulwane sesibili afaka:
I-Gliclazide - inomphumela omuhle wokuqothuka kwe-microcirculation, ukuphuma kwegazi, kunomthelela omuhle kwizinkinga ezinesifo sikashukela.
I-Glibenclamide - inethonya elinamandla kakhulu le-hypoglycemic. Njengamanje, kunezincwadi eziningi ezengeziwe ezikhuluma ngomphumela ongemuhle walesi sidakamizwa kwezifo zenhliziyo.
I-Glipizide - Inomphumela wehlise ushukela, kepha isikhathi sokusebenza sifushane kunaleso se-glibenclamide.
Glycidone - okuwukuphela kwesidakamizwa esivela kuleli qembu, esinqunyelwe iziguli ezinenkinga yokulimala kwezinso. Inesikhathi esifushane kakhulu sokwenza.
Kulungiselelwe ukwethulwa kwamalungiselelo wesizukulwane sesithathu I-Glimeprimide:
iqala ukwenza isenzo ngaphambi kwesikhathi futhi iba nesikhathi eside sokuvezwa (kufika emahoreni angama-24) kumthamo ophansi,
kungenzeka ukuphuza umuthi isikhathi esisodwa kuphela ngosuku,
ayinciphisi ukugcinwa kwe-insulin ngesikhathi sokuzivocavoca,
kubangela ukukhishwa kwe-insulin ngokushesha ekuphenduleni kokudla,
singasetshenziselwa ukwehluleka okulinganiselwe kwezinso,
unobungozi obuphansi be-hypoglycemia uma uqhathanisa nezinye izidakamizwa ezikulesi sigaba.
Ukusebenza okuphezulu kakhulu kwamalungiselelo we-sulfonylurea kuyabonakala ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, kodwa ngesisindo somzimba esivamile.
Nikeza izidakamizwa ze-sulfonylurea zesifo sikashukela sohlobo 2, lapho ukudla nokuzivocavoca umzimba njalo kungasizi.
Ukulungiswa kwe-Sulfonylurea kuyaphulwa: ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1, ezikhulelwe nangesikhathi sokuncelisa, ngesifo esinzima sesibindi nezinso, esine-gangrene yesifo sikashukela. Ukunakekelwa okuyisipesheli kumele kuthathwe uma kunesilonda esiswini kanye nasezinyambeni, kanye nasezigulini ezinesifo sotshwala ezingalapheki.
Ngokwezibalo, ngeshwa, yingxenye eyodwa kuphela kweziguli ethola isinxephezelo esifanele sesifo sikashukela ngokusetshenziswa kwe-sulfonylureas. Ezinye iziguli zinconywa ukuthi zihlanganise le mithi nezinye izidakamizwa ezibekwe etafuleni, noma shintshela ekwelashweni kwe-insulin.
Umuthi okuyiwo kuphela kuleli qembu metformin, ebambezela ukukhiqizwa kanye nokukhululwa kwe-glucose esibindini, kuthuthukisa ukusetshenziswa kwe-glucose ngezicubu ze-peripheral, ithuthukise ukuhamba kwegazi, futhi ibuye ivume ukusebenza kwe-lipid metabolism. Umphumela we-hypoglycemic ukhula ezinsukwini ezingama-2-3 ngemuva kokuqala komuthi.Ngesikhathi esifanayo, izinga lokuzila ukudla kwe-glycemia liyancipha, futhi isifiso sokudla siyancipha.
Isici esiyingqayizivele se-metformin ukuqina, ngisho nokuncipha kwesisindo - akekho omunye ama-hypoglycemic agents onale mphumela.
Izinkomba zokusetshenziswa kwe-metformin yilezi: uhlobo 2 lwesifo sikashukela ezigulini ezinokweqile, i-prediabetes, ukungabekezelelani namalungiselelo we-sulfonylurea.
I-Metformin ihlinzekelwe ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-1, ezikhulelwe nangesikhathi sokuqunjelwa, ngesifo esinzima sesibindi nezinso, kanye nezinkinga zesifo sikashukela, izifo ezithinta kakhulu, nanoma yiziphi izifo ezihambisana nokuhlinzekwa okunganele kwezitho ezinomoya-mpilo.
I-Alpha Glycosidase Inhibitors
Izidakamizwa zaleli qembu zifaka i-acarbose futhi miglitol, elehlisa ukwephulwa kwamakhakhithika emathunjini, okuqinisekisa ukufakwa kancane kancane kweglucose egazini. Ngenxa yalokhu, ukukhuphuka kukashukela wegazi ngesikhathi sokudla kusuliwe, akukho bungozi be-hypoglycemia.
Isici sale mishanguzo ukusebenza kwabo ngokudla amanani amaningi ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi. Uma ama-carbohydrate alula adla ekudleni kwesiguli, ukwelashwa ngama-alpha-glycosidase inhibitors akunikezi umphumela omuhle. Indlela yokusebenza ecacisiwe yenza ukuthi izidakamizwa zaleli qembu zisebenze kakhulu ekuzileni glycemia okujwayelekile kanye nokukhuphuka okubukhali ngemuva kokudla. Futhi, le mishanguzo empeleni ayikhulisi isisindo somzimba.
Ama-inhibitors we-Alpha-glycosidase akhonjiswa ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ngokudla nokuzivocavoca kokungasebenzi kahle nge-predominance ye-hyperglycemia ngemuva kokudla.
Ukuthinteka kokusetshenziswa kwe-alpha-glycosidase inhibitors yile: isifo sikashukela se-ketoacidosis, i-cirrhosis, ukuvuvukala kwamathumbu kwesibeletho kanye nokulimala kwamathumbu, i-pathology yesibeletho ngokwanda kwamagesi okwenziwa, i-ulcerative colitis, ukuvinjwa kwamathumbu, i-hernias enkulu, umsebenzi wezinhlungu obabazekayo.
Izidakamizwa ezikuleli qembu zifaka pioglitazone, rosiglitazone, troglitazoneanciphisa ukumelana ne-insulin, anciphise ukuphuma kwe-glucose esibindini, agcine umsebenzi wamaseli akhiqiza i-insulin.
Isenzo sale mishanguzo sifana nesenzo se-metformin, kepha sincishwa izimfanelo zaso ezingezinhle - ngaphezu kokunciphisa ukumelana ne-insulin, izidakamizwa zaleli qembu ziyakwazi ukwehlisa ukukhula kwezinkinga ze-renal kanye ne-hypertension ye-arterial, zithinte kahle i-lipid metabolism. Kepha, ngakolunye uhlangothi, lapho uthatha ama-glitazones, kufanele ubheke njalo ukusebenza kwesibindi. Njengamanje, kunobufakazi bokuthi ukusetshenziswa kwe-rosiglitazone kungakhuphula ubungozi bokuqothuka kwe-myocardial kanye nokwehluleka kwenhliziyo.
Ama-glitazones akhonjiswa ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2 ezimweni zokungasebenzi kahle kokudla kanye nokuzivocavoca umzimba ngokumelana ne-insulin.
Contraindication yilezi: uhlobo 1 sikashukela i-mellitus, i-ketoacidosis yesifo sikashukela, ukukhulelwa kanye nokuqunjelwa, isifo sesibindi esinamandla, ukwehluleka okukhulu kwenhliziyo.
Izidakamizwa ezikuleli qembu zifaka repaglinide futhi nateglinideukuba nomphumela wesikhashana wokunciphisa ushukela. I-Meglitinides ilawula izinga le-glucose ngemuva kokudla, okwenza ukuthi kungabambeleli ekudleni okuqinile, ngoba umuthi usetshenziswa ngokushesha ngaphambi kokudla.
Isici esiyingqayizivele se-meglitinides ukwehla okukhulu kweshukela: esiswini esingenalutho ngo-4 mmol / l, ngemuva kokudla - ngo-6 mmol / l. Ukuhlushwa kwe-hemoglobin HbA1c ye-glycated kuncishiswa ngo-2%. Ngokusetshenziswa isikhathi eside akubangeli ukuzuza kwesisindo futhi akudingi ukukhethwa komthamo. Ukwanda komphumela we-hypoglycemic ubonwa ngenkathi uthatha utshwala nezidakamizwa ezithile.
Inkomba yokusetshenziswa kwe-meglitinides uhlobo 2 sikashukela ezimweni zokungasebenzi kahle kokudla kanye nokuzivocavoca umzimba.
I-Miglitinides i-contraindication: kwiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-1 sikashukela, ezine-ketoacidosis yesifo sikashukela, abesifazane abakhulelwe kanye nabancelisa ibele, ngokuzwela okwengeziwe komuthi.
QAPHELA! Imininingwane enikelwe isiza DIABET-GIPERTONIA.RU isethenjwa kuphela. Ukuphathwa kwesiza akunasibopho semiphumela emibi engaba khona uma uthatha noma yimuphi umuthi noma izinqubo ngaphandle kokuqokwa ngudokotela!
I-Hypoglycemic noma izidakamizwa ze-antidiabetesic yimithi eyehlisa ushukela wegazi futhi isetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela.
Kanye ne-insulin, amalungiselelo awo afanele ukusetshenziswa kwe-parenteral kuphela, kunezindlela eziningi zokwenziwa ezinomphumela we-hypoglycemic futhi ezisebenza lapho zithathwa ngomlomo. Ukusetshenziswa okuyinhloko kwale mishanguzo kunesifo sikashukela sohlobo 2.
Ama-ejenti we-Oral hypoglycemic (hypoglycemic) angahlukaniswa ngokulandelayo:
— derivatives sulfonylurea (glibenclamide, glycidone, glyclazide, glimepiride, glipizide, chlorpropamide),
— ama-meglitinides (nateglinide, repaglinide),
— ama-biguanides (i-buformin, i-metformin, i-phenformin),
— nguyenkungu (pioglitazone, rosiglitazone, ciglitazone, englitazone, troglitazone),
— i-alpha glucosidase inhibitors (i-acarbose, i-miglitol),
Izakhiwo ze-Hypoglycemic ezitholakala ku-sulfonylurea zitholwe ngengozi. Amandla we-compounds yaleli qembu ukuphuma nomphumela we-hypoglycemic atholakala kuma-50s, lapho kwehla ukwehla kwegazi glucose ezigulini ezithola imishanguzo ye-antibacterial sulfonamide ekwelapheni izifo ezithathelwanayo. Kulokhu, ukusesha kwaqala kokutholwa kwe-sulfonamides enomphumela obizwa ngokuthi yi-hypoglycemic kuma-50s. Ukuqanjwa kokutholwa kokuqala kwe-sulfonylurea okungasetshenziswa ekwelapheni isifo sikashukela kwenziwa. Izidakamizwa zokuqala ezinjalo kwakuyi-carbutamide (Germany, 1955) ne-tolbutamide (USA, 1956). Ekuqaleni kweminyaka engama-50. lezi zinto ezisuselwa ku-sulfonylurea seziqalile ukusetshenziswa kwezokwelapha. Ngo-60-70s. kwavela ama-sulfonylureas wesizukulwane sesibili. Ummeli wokuqala wamalungiselelo wesulfonylurea wesizukulwane sesibili, i-glibenclamide, waqala ukusetshenziswa ukwelapha isifo sikashukela ngo-1969, ngo-1970 glibornuride yaqala ukusetshenziswa, kwathi ngo-1972, i-glipizide. IGliclazide ne-glycidone kwavela cishe ngasikhathi sinye.
Ngo-1997, kwavunywa kabusha i-repaglinide (iqembu lama-meglitinides) ekwelapheni isifo sikashukela.
Umlando wokusetshenziswa kwama-biguanides waqala emuva kuma-Middle Ages, lapho isitshalo sasetshenziswa ukwelapha isifo sikashukela IGalega officinalis (i-french lily).
I-Thiazolidinediones (glitazones) yaqala ukwenza umtholampilo ngonyaka we-1997. Izidakamizwa zokuqala ezivunyelwe ukusetshenziswa njenge-ejog ye-hypoglycemic zaba yi-troglitazone, kodwa ngonyaka we-2000 ukusetshenziswa kwayo kwavinjwa ngenxa ye-hepatotoxicity ephezulu. Kuze kube manje, kusetshenziswe izidakamizwa ezimbili kuleli qembu - pioglitazone kanye ne-rosiglitazone.
Isenzo sulfonylureas ikakhulukazi ezihambisana nokukhuthaza amaseli we-pancreatic beta, ahambisana nokugqugquzela kanye nokukhululwa okwengeziwe kwe-insulin endulin.
Ngokulashwa isikhathi eside nokuphuma kwe-sulfonylurea, umphumela wabo wokuqala ovuselelayo wokugodlwa kwe-insulin uyanyamalala. Kukholelwa ukuthi lokhu kungenxa yokwehla kwenani lama-receptors kumaseli e-beta. Ngemuva kwekhefu ekwelashweni, ukusabela kwamaseli we-beta ekuphuzeni izidakamizwa zaleli qembu kuyabuyiselwa.
Amanye ama-sulfonylureas nawo anemiphumela eyengeziwe ye-pancreatic. Imiphumela ye-extrapancreatic ayibalulekanga kangako emtholampilo, ifaka phakathi ukwanda kokuzwela kwezicubu ezincike e-insulin ukufakwa kwe-insulin yendawo kanye nokwehla ekwakhekeni kwe-glucose esibindini. Indlela yokuthuthukiswa kwale miphumela ibangelwa ukuthi le mishanguzo (ikakhulukazi i-glimepiride) inyusa inani lama-insulin-sensitive receptors kumaseli kwelitshe, ithuthukise ukusebenzisana kwe-insulin-receptor, futhi ibuyise ukudluliselwa kwesiginali ye-postreceptor.
Ngaphezu kwalokho kunobufakazi bokuthi i-prizvodnye sulfonylureas ikhuthaza ukukhishwa kwe-somatostatin bese ngaleyo ndlela inqanda ukucashunwa kweglucagon.
Mina isizukulwane: tolbutamide, carbamide, tolazamide, acetohexamide, chlorpropamide.
Isizukulwane II: glibenclamide, glisoxepide, glibornuril, glycidone, glyclazide, glipizide.
Isizukulwane sesithathu: glimepiride.
Njengamanje, eRussia, amalungiselelo e-sulfonylurea wesizukulwane sokuqala awasetshenziswa.
Umehluko omkhulu phakathi kwezidakamizwa zesizukulwane sesibili nokuthathwe kwesulfonylurea kwesizukulwane sokuqala kungumsebenzi omkhulu (izikhathi ezingama-50-100), ezivumela ukuthi zisetshenziswe ngemithamo ephansi futhi, ngenxa yalokho, kunciphisa amathuba emiphumela emibi. Abamele abantu abathile abasuselwa ku-hypoglycemic derivatives ye-sulfonylureas yesizukulwane soku-1 nesesi-2 bayashiyana emsebenzini nasekubekezelelekeni. Ngakho-ke, umthamo wansuku zonke wezidakamizwa zesizukulwane sokuqala - i-tolbutamide ne-chlorpropamide - 2 no-0,75 g, ngokulandelana, nezidakamizwa zesizukulwane sesibili - glibenclamide - 0.02 g, glycvidone - 0.06-0.12 g. Izidakamizwa zesizukulwane sesibili zivame ukubekezelelwa kangcono yiziguli. .
Amalungiselelo weSulfonylurea anobunzima obahlukene kanye nesikhathi esisebenza, esinquma ukukhetha kwezidakamizwa uma kunqunyelwe. I-Glibenclamide inomphumela obizwa kakhulu we-hypoglycemic yazo zonke izinto ezithathwe ku-sulfonylurea. Kusetshenziswa njengesethenjwa sokuhlola umphumela we-hypoglycemic wezidakamizwa ezenziwe kabusha. Umphumela onamandla we-hypoglycemic ye-glibenclamide kungenxa yokuthi unobuhlobo obuphakeme kakhulu beziteshi ze-potassium ezithembele kakhulu zamaseli we-pancreatic beta. Njengamanje, i-glibenclamide ikhiqizwa zombili ngendlela yefomu lomthamo wendabuko nangendlela efomu elakhiwe ngemicibisholo - ifomu elakhiwe ngokukhethekile le-glibenclamide elinikeza iphrofayili efanelekile ye-pharmacokinetic ne-pharmacodynamic ngenxa yokufaka ngokushesha nangokuphelele (i-bioavailability icishe ibe yi-100%) futhi yenza ukuthi isebenzise izidakamizwa ku imithamo emincane.
I-Gliclazide yi-ejenti yesibili evame kakhulu yomlomo kwe-hypoglycemic ngemuva kwe-glibenclamide. Ngaphezu kweqiniso lokuthi i-gliclazide inomphumela we-hypoglycemic, ithuthukisa imingcele ye-hematological, izakhiwo zegazi, inomphumela omuhle ohlelweni olusezingeni eliphezulu kanye ne-microcirculation, futhi ivimbela ukukhula kwe-microvasculitis, kufaka phakathi ukulimala kwe-retina, kuvimbela ukuhlanganiswa kweplathigi, kukhulisa kakhulu inkomba yokuhlukaniswa okuhlobene, kukhulisa umsebenzi we-heparin ne-fibrinolytic, kukhulisa ukubekezelelana kwe-heparin, futhi kubuye kubonise izakhiwo ze-antioxidant.
I-Glycvidone iyisidakamizwa esingabelwa iziguli ezinokukhubazeka kwe-renal wastani ama-5% kuphela ama-metabolites adonswa ngezinso, amanye (95%) - ngamathumbu.
I-Glipizide, enomphumela omenyezelwe, ibeka ingozi enkulu ngokuya ngemiphumela ye-hypoglycemic, ngoba ayinayo futhi ayinayo i-metabolites esebenzayo.
Izidakamizwa ze-antidiabetic zomlomo ziyizidakamizwa eziphambili zokwelashwa kohlobo lwe-2 yesifo sikashukela (okungaxhomekeki kwe-insulin) futhi kwesinye isikhathi ziyalelwa iziguli ezineminyaka engaphezu kwengama-35 ubudala ngaphandle ketoacidosis, ukusilela kokudla okungenamsoco, izinkinga noma izifo ezihlangana zidinga ukwelashwa ngokushesha kwe-insulin.
Ukulungiselela kweqembu le-sulfonylurea akunconywa kwiziguli okuthi, ngokudla okufanele, izidingo zansuku zonke ze-insulin zidlule amayunithi angama-40. Futhi, azinqunyelwe iziguli ezinezinhlobo ezinamandla zesifo sikashukela i-mellitus (ene-beta-cell insuffence) enomlando we-ketosis noma isifo sikashukela, ene-hyperglycemia ngaphezulu kwe-13.9 mmol / L (250 mg%) esiswini esingenalutho kanye ne-glucosuria ephezulu ngesikhathi sokudla.
Ukudluliselwa ekwelashweni nezidakamizwa ze-sulfonylurea ezigulini ezinesifo sikashukela eselashwa i-insulin kungenzeka uma ukubuyiswa kwe-carbohydrate metabolism kunxephezelwa kumithamo ye-insulin engaphansi kwama-40 amayunithi / ngosuku. Ngomthamo we-insulin ufike kuma-unit ayi-10 / ngosuku, ungashintsha ngokushesha ukwelashwa nge-sulfonylurea derivatives.
Ukusetshenziswa isikhathi eside kwe-sulfonylurea derivatives kungadala ukuthuthukiswa kokumelana, okunganqotshwa ngokuhlanganiswa kwenhlanganisela nokulungiselela kwe-insulin. Kuhlobo 1 lwesifo sikashukela mellitus, ukuhlanganiswa kwamalungiselelo we-insulin nokuphuma kwe-sulfonylurea kwenza sikwazi ukunciphisa isidingo sansuku zonke se-insulin futhi kusiza ukwenza ngcono lesi sifo, kufaka phakathi ukubambezela ukuqhubekela phambili kwe-retinopathy, okuthi ngezinga elithile kuhlotshaniswe nomsebenzi we-angioprotective wokuphuma kwe-sulfonylurea (ikakhulukazi isizukulwane II). Ngaso leso sikhathi, kunezinkomba zomphumela wabo we-atherogenic.
Ngaphezu kwalokho, izinto eziphuma ku-sulfonylurea zihlanganiswa ne-insulin (inhlanganisela enjalo ibhekwa njengefanele uma isimo sesiguli singathuthuki nge-IU engaphezu kwe-100 ye-insulin ngosuku), ngesinye isikhathi zihlanganiswa ne-greatuanides ne-acarbose.
Lapho usebenzisa izidakamizwa ze-sulfonamide hypoglycemic, kufanele kukhunjulwe ukuthi ama-antibacterial sulfonamides, ama-anticoagulants, i-butadion, i-salicylates, i-ethionamide, i-tetracyclines, i-chloramphenicol, i-cyclophosphamide inhibit metabolism yawo futhi ikhuphule ukusebenza kahle (hypoglycemia can grow). Lapho okususelwa ku-sulfonylurea kuhlanganiswa ne-thiazide diuretics (hydrochlorothiazide, njll.) Kanye ne-BKK (nifedipine, i-diltiazem, njll.), Ukumelana kwemithambo kwenzeka kumithamo emikhulu - ama-thiazides aphazamisa umphumela wokuphuma kwe-sulfonylurea ngenxa yokuvulwa kweziteshi ze-potassium, namaseli we-BKK ukungena kokugudluzwa kokuphuma kwe-betension. izindlala.
Izinsizakusebenza ze-sulfonylureas zithuthukisa umphumela nokungabekezeleli kotshwala, mhlawumbe ngenxa yokulibaziseka ku-oxidation ye-acetaldehyde. Ukusabela okunjenge-Antabuse kungenzeka.
Zonke izidakamizwa ze-sulfonamide hypoglycemic ziyanconywa ukuba zithathwe ihora eli-1 ngaphambi kokudla, okunomthelela ekunciphiseni okubizwa kakhulu kwe-postprandial (ngemuva kokudla) i-glycemia. Esimweni sobunzima obukhulu besifo se-dyspeptic phenomena, kunconywa ukusebenzisa lezi zidakamizwa ngemuva kokudla.
Imiphumela engathandeki yokutholakala kwe-sulfonylurea, ngaphezu kwe-hypoglycemia, ukuphazamiseka kwengqondo (kufaka phakathi isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo), i-cholestatic jaundice, isisindo somzimba, ukubuyela emuva kwe-leukopenia, i-thrombocytopenia, i-agranulocytosis, i-aplastic kanye ne-hemolytic anemia. ukulunywa, i-erythema, i-dermatitis).
Ukusetshenziswa kwamalungiselelo we-sulfonylurea ngesikhathi sokukhulelwa akunconywa, ngoba iningi labo lingabasesigabeni C ngokusho kwe-FDA (Ukudla Nezidakamizwa), kunqunywa i-insulin.
Iziguli esezikhulile azinconywa ukusebenzisa izidakamizwa ezisebenza isikhathi eside (glibenclamide) ngenxa yengozi eyandayo ye-hypoglycemia. Ngalesi sikhathi, kungcono ukusebenzisa izinto ezitholakala kuhlu olufushane - i-gliclazide, i-glycidone.
Meglitinides - Abalawuli be-prandial (repaglinide, nateglinide).
I-Repaglinide ithathwe kwe-benzoic acid. Naphezu komehluko wesakhiwo samakhemikhali kusuka kokutholakala kwe-sulfonylurea, kuvimbela neziteshi ze-potassium ezincike ku-membrane yamaseli we-beta asebenzayo wezinto ezisetshenziswayo ze-islet pancreatic. Impendulo ye-insulinotropic ekudleni iba phakathi kwemizuzu engama-30 ngemuva kokufaka isicelo futhi ihambisana nokwehla kwe-glucose yegazi ngesikhathi sokudla (ukugcwala kwe-insulin phakathi kokudla akukhuphuki). Njenge-sulfonylurea derivatives, umphumela oyinhloko we-hypoglycemia. Ngokuqapha, i-repaglinide ibekelwa iziguli ezinokwehluleka kwe-hepatic kanye / noma ukwehluleka kwezinso.
INateglinide ithathwe ku-D-phenylalanine.Ngokungafani namanye ama-ejenti omlomo we-hypoglycemic, umphumela we-nateglinide ekuqunjelweni kwe-insulin ushesha ngokushesha, kepha uphikelela kancane. I-Nateglinide isetshenziswa ngokuyinhloko ukunciphisa i-postprandial hyperglycemia ngohlobo 2 sikashukela.
IBiguanides, eyaqala ukusetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 2 kuma-70s, musa ukukhuthaza ukuvikelwa kwe-insulin ngamaseli e-pancreatic beta. Umphumela wabo unqunywa ikakhulukazi ngokuvinjwa kwe-gluconeogeneis esibindini (kufaka phakathi i-glycogenolysis) kanye nokwanda kokusetshenziswa kweglucose yizicubu zomzimba. Zibuye zivimbele ukungasebenzi kwe-insulin futhi zithuthukise ukubopha kwayo kuma-insulin receptors (lokhu kukhulisa ukumuncwa kweglucose kanye nemetabolism yayo).
I-Biguanides (ngokungafani ne-sulfonylurea derivatives) ayinciphisi ushukela wegazi kubantu abanempilo nasezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ngemuva kokubulawa yindlala ebusuku, kepha ibeke umkhawulo wayo ngemuva kokudla, ngaphandle kokubangela i-hypoglycemia.
I-Hypoglycemic biguanides - metformin nabanye - isetshenziselwa uhlobo lwe-mellitus yesifo sikashukela 2. Ngaphezu komphumela wokwehlisa ushukela, ama-biguanides, ngokusetshenziswa isikhathi eside, anomphumela omuhle ekusebenzeni kwe-lipid metabolism. Izidakamizwa zaleli qembu zivimbela i-lipognis (inqubo lapho ushukela nezinye izinto ziguqulwa zibe ngama-asidi asemzimbeni), kusebenze i-lipolysis (inqubo yokuhlukanisa ama-lipids, ikakhulukazi ama-triglycerides aqukethe emafutheni, kuma-acid abo aqukethe isenzo se-lipase enzyme), anciphise isifiso sokudla, futhi akhuthaze ukunciphisa umzimba. Kwezinye izimo, ukusetshenziswa kwazo kuhambisana nokuncipha kokuqukethwe kwe-triglycerides, cholesterol ne-LDL (okunqunywe esiswini esingenalutho) kuseramu yegazi. Kuhlobo lwesifo sikashukela sikashukela sohlobo 2, ukuphazamiseka kwe-carbohydrate metabolism kuhlanganiswa nezinguquko ezibizwayo ku-lipid metabolism. Ngakho-ke, ama-85-90% eziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zinesisindo somzimba esikhuphukile. Ngakho-ke, ngenhlanganisela yohlobo 2 lwesifo sikashukela esinezikhulu ngokweqile, izidakamizwa ezifanekisa ne-lipid metabolism ziyaboniswa.
Inkomba yokulawulwa kwe-biguanides uhlobo lwe-2 isifo sikashukela (ikakhulukazi ezimweni ezihambisana nokukhuluphala) kanye nokungasebenzi kahle kokulashwa kokudla, kanye nokungasebenzi kwamalungiselelo we-sulfonylurea.
Uma kungekho i-insulin, umphumela we-Biguanides awaveli.
AmaBiguanides angasetshenziswa ngokuhambisana ne-insulin lapho kukhona ukumelana nakho. Inhlanganisela yalezi zidakamizwa nge-sulfonamide derivatives iboniswa ezimweni lapho lezi zokugcina zinganikezeli ukulungiswa okuphelele kokuphazamiseka kwe-metabolic. AmaBiguanides angadala ukukhula kwe-lactic acidosis (lactic acidosis), okukhawulela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuleli qembu.
AmaBiguanides angasetshenziswa ngokuhambisana ne-insulin lapho kukhona ukumelana nakho. Inhlanganisela yalezi zidakamizwa nge-sulfonamide derivatives iboniswa ezimweni lapho lezi zokugcina zinganikezeli ukulungiswa okuphelele kokuphazamiseka kwe-metabolic. AmaBiguanides angadala ukukhula kwe-lactic acidosis (lactic acidosis), okukhawulela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezithile kuleli qembu.
Ama-Biguanides afakwa ku-contraindication lapho kukhona i-acidosis kanye nokuthambekela kukho (kuvuselele futhi kwandise ukunqwabelana kwe-lactate), ezimweni ezihambisana ne-hypoxia (kufaka phakathi ukwehluleka kwenhliziyo nokuphefumula, isigaba esibuhlungu se-myocardial infarction, i-acute cerebrovascular insufficiency, anemia), njll.
Imiphumela emibi ye-biguanides ibonwa kaningi ngaphezu kokuphuma kwe-sulfonylurea (20% uma kuqhathaniswa ne-4%), okokuqala, imiphumela engemihle yesisu: ukunambitheka kwensimbi emlonyeni, izimpawu ze-dyspeptic, njll. Ngokuhlukile kwe-sulfonylurea derivatives, hypoglycemia lapho usebenzisa i-biguanides (isb. Metformin ) kwenzeka kakhulu.
I-Lactic acidosis, kwesinye isikhathi ebonakala lapho ithatha i-metformin, ibhekwa njengengxaki enkulu, ngakho-ke i-metformin akufanele ibekelwe ukwehluleka kwezinso kanye nezimo ezibhekene nokukhula kwayo - ukulimala kwe-renal kanye / noma umsebenzi wesibindi, ukuhluleka kwenhliziyo, isifo samaphaphu.
AmaBiguanides akufanele anqunywe ngasikhathi sinye ne-cimetidine, ngoba ancintisanayo lapho inqubo yokuqashelwa kwe-tubular esezinso, engaholela ekubumbeni kwama-Biguanides, ngaphezu kwalokho, i-cimetidine inciphisa i-biotransformation yama-Biguanides esibindini.
Ukuhlanganiswa kwe-glibenclamide (okuvela ku-sulfonylurea yesizukulwane sesibili) kanye ne-metformin (biguanide) kuhlanganisa kahle izakhiwo zazo, ukuvumela ukuthi ufinyelele umphumela ofiselekile we-hypoglycemic ngethamo eliphansi lomuthi ngamunye bese ngaleyo ndlela unciphise ubungozi bemiphumela emibi.
Kusukela ngo-1997, wangena emkhakheni wezokwelapha i-thiazolidinediones (glitazones), isisekelo sesakhiwo samakhemikhali okuyi-thiazolidine ring. Leli qembu elisha lama-antidiabetesic agents lifaka i-pioglitazone ne-rosiglitazone. Izidakamizwa zaleli qembu zandisa ukuzwela kwezicubu eziqondiwe (izicubu, izicubu ze-adipose, isibindi) ku-insulin, ukwakheka kwe-lipid ephansi kumaseli wemisipha namafutha. Ama-Thiazolidinediones angama-agonists abakhethayo be-receptors-nyukliya PPARγ (i-proxisome proliferator-activated receptor-gamma). Ebantwini, la ma-receptor akhiwe “izicubu eziqondiwe” ezibalulekile ezenzweni ze-insulin: izicubu ze-adipose, emsipha wamathambo nesibindi. Ama-receptors e-PPARγ alawula ukuqoshwa kwezakhi zofuzo eziphendula insulin ezithintekayo kulawulo lokukhiqizwa kwe-glucose, ukuthutha nokusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, izinhlobo ezibucayi ze-PPARγ zibandakanyeka kokutholwa kwamafutha acid.
Ukuze ama-thiazolidinediones akhiphe umphumela wawo, ukuba khona kwe-insulin kuyadingeka. Le mishanguzo inciphisa ukumelana kwe-insulin kwezicubu zomzimba nesibindi, ikhulisa ukusetshenziswa kwe-glucose exhomeke ku-insulin futhi kunciphise ukukhishwa kwe-glucose esibindini, ukwehlisa ama-triglycerides aphansi, ukukhuphula ukuqina kwe-HDL ne-cholesterol, futhi kuvikele i-hyperglycemia esheshayo ngemuva kokudla, kanye ne-hemoglobin glycosylation.
I-Alpha Glucosidase Inhibitors (i-acarbose, i-miglitol) ivimbela ukuqhekeka kwe-poly- ne-oligosaccharides, kunciphisa ukwakheka nokufakwa kweglue esiswini futhi ngaleyo ndlela kuvimbele ukukhula kwe-postprandial hyperglycemia. Ama-carbohydrate athathwe ngokudla okungashintshiwe angena ezingxenyeni ezingezansi zamathumbu amancane namakhulu, kanti ukumunca kwama-monosaccharides kuthathe isikhathi eside kube ngamahora angama-3-4. Ngokungafani nama-sulfonamide hypoglycemic agents, awakhuphi ukukhishwa kwe-insulin futhi, ngakho-ke, akubangeli i-hypoglycemia.
Kwakhonjiswa ukuthi ukwelashwa kwe-acarbose yesikhathi eside kuhambisana nokuncishiswa okukhulu kwengozi yokuthola ubunzima bezinkinga zenhliziyo zesimo se-atherosranceotic. Ama-inhibitors we-Alpha glucosidase asetshenziswa njenge-monotherapy noma ngokuhlangana namanye ama-ejenti omlomo we-hypoglycemic. Umthamo wokuqala ngu-25-50 mg ngokushesha ngaphambi noma phakathi nesikhathi sokudla, futhi kamuva ungakhuphuka kancane kancane (umthamo omkhulu wansuku zonke ngu-600 mg).
Izinkomba zokusetshenziswa kwe-alpha-glucosidase inhibitors ziyi-2 mellitus yesifo sikashukela ngokungasebenzi kahle kokudla (inkambo okufanele ibe okungenani izinyanga eziyi-6), kanye nohlobo lwe-1 yesifo sikashukela (njengengxenye yokwelashwa ngokuhlanganiswa).
Izidakamizwa zaleli qembu zingadala iziphithiphithi ze-dyspeptic ezibangelwa ukwephulwa kokugaya kanye nokumuncwa kwama-carbohydrate, atholakala ekoloni ngokwakhiwa kwama-acid amaningi, i-carbon dioxide ne-hydrogen. Ngakho-ke, lapho unquma i-alpha-glucosidase inhibitors, ukunamathela ngokuqinile ekudleni okunokuqukethwe okulinganiselwe kwama-carbohydrate ayinkimbinkimbi, kufaka phakathi sucrose.
I-Acarbose ingahlanganiswa namanye ama-antidiabetesic agents. I-Neomycin ne-colestyramine zithuthukisa umphumela we-acarbose, kuyilapho imvamisa nobunzima bemiphumela emibi kusuka emgudwini wegastrointestinal treakanda. Lapho kuhlanganiswa nama-antacid, ama-adsorbents nama-enzyme athuthukisa ukugaya, ukusebenza kwe-acarbose kuyancipha.
Njengamanje, sekuvele isigaba esisha sabenzeleli be-hypoglycemic - incretinomimetics. Ama-ascorin ama-hormone atholakala ngezinhlobo ezithile zamaseli amancane wamathumbu ukuphendula ukuthathwa kokudla futhi avuse ukugcinwa kwe-insulin. Ama-hormone amabili aqedwa: i-glucagon-like polypeptide (GLP-1) ne-insulinotropic polypeptide (HIP) ye-glucose.
To incretinomimetics faka amaqembu ama-2 wezidakamizwa:
- izinto ezilingisa umphumela we-GLP-1 - izifaniso ze-GLP-1 (liraglutide, exenatide, lixisenatide),
- izinto ezandisa isikhathi se-endo native GLP-1 ngenxa yokuvinjwa kwe-dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) - i-enzyme ebhubhisa i-GLP-1 - DPP-4 inhibitors (sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin, alogliptin).
Ngakho-ke, iqembu lama-hypoglycemic agents lifaka izidakamizwa eziningi ezisebenzayo. Banendlela yokusebenza ehlukile, ehlukile kumakhemikhali e-pharmacokinetic nase-pharmacodynamic. Ukwazi kwalezi zici kuvumela udokotela ukuba enze ukukhetha okukhethekile kakhulu futhi okuyikho kokwelashwa.
1. Thayipha isifo sikashukela sokuqala.
2. I-ketoacidosis yesifo sikashukela (izinga eleqile egazini lezidumbu ze-ketone), ukoma.
3. Ukukhulelwa nokukhulelwa.
4. Izifo zesibindi ezingamahlalakhona nezishubile ezinomsebenzi ongasebenzi kahle.
5. Ukwehluleka kwenhliziyo.
6. I-Hypersensitivity kulo muthi.
UTroglitazone (Rezulin) wayengumuthi wesizukulwane sokuqala saleli qembu. Ubuye wakhunjulwa kusukela ekuthengisweni, njengoba umphumela wakhe wabonakala kabi esibindini.
I-Rosiglitazone (Avandia) isidakamizwa sesizukulwane sesithathu kuleli qembu. Yayeka ukusetshenziswa ngo-2010 (yavinjelwa e-European Union) ngemuva kokuthi kufakazelwe ukuthi iyayandisa ingozi yesifo senhliziyo.
Igama lezinto ezisebenzayo Izibonelo Zokuhweba Dosetha kuthebhulethi engu-1
I-Pioglitazone I-Pioglitazone Bioton 15
Ngaphezu kwalokho, kufakazelwe ukuthi umuthi uneminye imiphumela ezuzisayo:
Ithinta izinga le-cholesterol (ikhulisa ukuba khona kwe- "cholesterol enhle", okungukuthi, i-HDL, futhi ayikhuphi "cholesterol embi" - LDL),
Inqanda ukwakheka nokukhula kwe-atherosclerosis,
Yehlisa ubungozi besifo senhliziyo (isb., Ukushaya kwenhliziyo, unhlangothi).
Funda kabanzi: UJardins uzovikela inhliziyo
Kuqondiswe kubani pioglitazone
I-pioglitazone ingasetjenziswa njengesidakamizwa esisodwa, i.e. monotherapy. Futhi, uma une-Type 2 sikashukela mellitus, izinguquko zakho endleleni yakho yokuphila azinikezi imiphumela elindelekile futhi kukhona ukuphikisana ne-metformin, ukubekezelelwa kwayo okungalungile nemiphumela emibi engaba khona
Ukusetshenziswa kwe-pioglitazone kungenzeka ngokuhambisana nezinye izidakamizwa ze-antidiabetes (ngokwesibonelo, i-acarbose) ne-metformin uma ezinye izenzo zingalethi impumelelo
I-pioglitazone nayo ingasetshenziswa nge-insulin, ikakhulukazi kubantu abamzimba wabo ophika ngokungafanele kwi-metformin.
Funda kabanzi: Ungayithatha kanjani i-metformin
Ungayithatha kanjani pioglitazone
Umuthi kufanele uphuzwe kanye ngosuku, ngomlomo, ngesikhathi esimisiwe. Lokhu kungenziwa ngaphambi nangemva kokudla, ngoba ukudla akukuthinti ukumuncwa umuthi. Ukwelashwa kuvame ukuqala ngomthamo ophansi. Ezimweni lapho umphumela wokwelashwa ungagculisi khona, ungakhuphuka kancane kancane.
Ukusebenza komuthi kubonwa ezimweni lapho kunesidingo khona ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 2, kepha i-metformin ayinakusetshenziswa, i-monotherapy enomuthi owodwa ayivunyelwe.
Ngaphezu kweqiniso lokuthi i-pioglitazone yehlisa i-postprandial glycemia, i-plasma glucose futhi isimamise i-glycated hemoglobin, nayo inomphumela omuhle wokucindezela kwegazi ne-cholesterol yegazi. Ngaphezu kwalokho, akubangeli ukungalingani.
I-Thiazolidinediones (TZD) - isigaba esisha semithi ye-antidiabetic yokusetshenziswa komlomo. Izidakamizwa ze-Thiazolidinedione (pioglitazone, rosiglitazone) zingene kulo mkhuba wezempilo kuphela eminyakeni yamuva. Njenge-biguanides, le mithi ayivuseleli ukugcinwa kwe-insulin, kepha ikhulisa ukuzwela kwezicubu zangaphakathi kuyo. Izingqinamba zalesi sigaba zisebenza njengama-agonists e-PPAR-y receptors yenuzi (i-peroxisome proliferator-activated receptor). Lama-receptors atholakala kumaseli wamafutha, izicubu kanye nesibindi. Ukwenza kusebenze kwama-receptors we-PPAR-y modulates okubhaliwe kwezinhlobo ezithile zezakhi zofuzo ezihambisana nokudluliswa kwemiphumela ye-insulin ukungena kweglucose nama-lipids kumaseli. Ngaphezu kokwehliswa kwezinga le-glycemia, ukuthuthukisa ukuzwela kwezicubu ukungena kwe-insulin kuthinta kahle iphrofayili ye-lipid (izinga lokuphakama kwezifo lipoprotein liyenyuka, okuqukethwe kwe-triglycerides kuyancipha). Njengoba kunikezwe ukuthi le mithi isebenza ngokuvuselela okubhalwe ku-gene, kuthatha izinyanga ezi-2-2 ukuthola umphumela omkhulu. Ezifundweni zemitholampilo, le mishanguzo inikeze ukwehla kwezinga le-HbAc nge-monotherapy cishe yi-0.5 kuya ku-2%.
Izidakamizwa zalesi sigaba zingasetshenziswa zihlanganiswe ne-PSM, insulin noma i-metformin. Inhlanganisela ne-metformin inesizathu sokuthi isenzo se-Biguanides senzelwe ikakhulukazi ukucindezela i-gluconeogeneis, futhi isenzo se-thiazolidinediones sihlose ukwandisa ukusetshenziswa kwe-glucose yangaphandle. Empeleni azibangeli i-hypoglycemia (kepha, njengama-biguanides, angandisa imvamisa ye-hypoglycemia ngokuhlangana nezidakamizwa ezikhuthaza ukuvikelwa kwe-insulin). Umphumela oyinhloko ukusetshenziswa kwe-glucose yangaphandle kanye nokwehliswa kwe-glycogeneis ngokusebenzisa ukusebenza kwezakhi zofuzo ezi-insulin (ukwehla kokumelana ne-insulin). Ama-Thiazolidinediones njengezidakamizwa eziqeda ukumelana ne-insulin, imbangela ehamba phambili yokuthuthukiswa kwesifo sikashukela sohlobo 2, yiqembu elithembisayo kakhulu lezidakamizwa ukuvimbela isifo sikashukela sohlobo 2. Umphumela wokuvimbela we-thiazolidinediones uphikelela izinyanga ezingaphezu kwezingu-8 ngemuva kokuhoxiswa kwawo. Kunombono wokuthi ama-glitazones ayakwazi ukulungisa ngokuphelele ukungabi nalutho kofuzo lwe-glucose metabolism, okuvumela hhayi kuphela ukubambezela ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela sohlobo 2, kodwa futhi nokuqeda ngokuphelele ukukhula kwayo.
Noma kunjalo, kuze kube manje lokhu kuwukuzikhohlisa nje kuphela.
Ukusetshenziswa kwama-thiazolidinediones ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 kuvula amathuba wokuvinjwa kwezinkinga zenhliziyo, indlela yokuthuthukisa okubangelwa kakhulu ukumelana ne-insulin okukhona. Idatha yesandulelo ephathelene nomphumela we-angioprotective we-thiazolidinediones isitholile kwezinye izifundo zokuhlola. Ucwaningo olufanayo lomtholampilo alukenziwa.
Kukhona izizukulwane ezintathu zama-thiazolidinediones emhlabeni:
- Isidakamizwa "esizukulwaneni sokuqala" - i-troglitazone (sikhombisa umphumela obizwa ngokuthi yi-hepatotoxic ne-cardiotoxic, lapho sasivinjelwe ukusetshenziswa),
- umuthi "wesizukulwane sesibili" - pioglitazone,
- "Isizukulwane sesithathu" izidakamizwa - rosiglitazone.
Njengamanje, isidakamizwa esivela esizukulwaneni sesibili se-thiazolidinediones - i-actos (pioglitazone hydrochloride) kusuka ku-Eli Lilly (e-USA) nesizukulwane sesithathu - i-avandium (rosiglitazone) ibhalisiwe eRussia. I-Actos iyatholakala ngesimo samathebulethi aqukethe i-15.30 no-45 mg we-esebenzayo ye-pioglitazone hydrochloride, kanye ngosuku, kungakhathalelwa ukuthathwa kokudla.
Umthamo wansuku zonke ngu-30-45 mg. IGlaxo SmithKJine Avandia (GSK) itholakala kwifomu lethebhulethi eliqukethe i-4 ne-8 mg yento esebenzayo ye-rosiglitazone, kanye noma kabili ngosuku, ngokungakhathalelwa kokudla. Umthamo wansuku zonke we-8 mg. Kuhlelwa ukukhipha isidakamizwa esihlanganisiwe yinkampani efanayo - i-Avandamet (inhlanganisela ye-avandia ne-metformin).
Ama-Thiazolidinediones asetshenziswa njenge-monotherapy, kepha angcono ngokuhlanganiswa nama-biguanides, i-acarbose, i-PSM, i-insulin ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Ukusetshenziswa okulinganiselwe kwaleli qembu lezidakamizwa kungenxa yezindleko zazo eziphakeme kakhulu.Umuthi, ongowesizukulwane sesibili sama-thiazolidinediones, awukhombisanga umphumela we-hepatotoxic. I-pioglitazone ayifakwanga esibindini, yakha ama-metabolites asebenzayo, akhululwa nge-bile. Omunye wemiphumela emibi kungaba ukubukeka kwe-edema, kanye nokuthola isisindo. Ngokuphikisana nesizinda sokwelashwa, kunconywa ukulawula izinga le-alanine ne-amartotransferase ye-alanine ne-aspartic aminotransferase futhi uyeke ukuthatha umuthi ezingeni le-enzyme elibuye livame ukwenzeka kabili. Kuyaluleka ukuthi uhlaziye umphumela womuthi ngokwelashwa okuhlala isikhathi eside (izinyanga ezintathu). Contraindication:
- Thayipha ushukela ongu-1
- ketoacidosis nganoma uluphi uhlobo lwesifo sikashukela,
- ukukhulelwa, ukukhulelwa
- okweqile kokujwayelekile kokudluliswa kwe-alanine amahlandla ama-3,
- i-virpatal enobungozi, i-hepatitis enobuthi,
- I-hepatitis engamahlalakhona.
Ukuvimbela Isifo Sikashukela sohlobo 2
Isivivinyo sasemtholampilo se-DREAM sikhombise ubungozi obuncishisiwe bokuthola isifo sikashukela ezigulini ezinokubekezelela ukubekezela kanye nokwanda okusheshayo kweglue glucose ezigulini ezithatha i-rosiglitazone (11, bheka ne-12). Lolu cwaningo lukhombisile ukuthi ukukhula kwesifo sikashukela kungabambezeleka ngeminyaka eyi-1.5, kepha kepha ubungozi bentuthuko bukhuphuka bese bufana naseqenjini le-placebo.